SupplyShock စျေး - အွန်လိုင်း M1 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို SupplyShock (M1)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ SupplyShock (M1) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ SupplyShock ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ SupplyShock တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
SupplyShock များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SupplyShockM1 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.552SupplyShockM1 သို့ ယူရိုEUR€0.467SupplyShockM1 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.423SupplyShockM1 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.503SupplyShockM1 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr4.91SupplyShockM1 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.48SupplyShockM1 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč12.22SupplyShockM1 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.06SupplyShockM1 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.73SupplyShockM1 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.773SupplyShockM1 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$12.25SupplyShockM1 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.28SupplyShockM1 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.96SupplyShockM1 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹41.32SupplyShockM1 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.93.23SupplyShockM1 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.758SupplyShockM1 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.845SupplyShockM1 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿17.15SupplyShockM1 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.84SupplyShockM1 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥59.02SupplyShockM1 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩654.66SupplyShockM1 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦213.95SupplyShockM1 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽40.32SupplyShockM1 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴15.17
SupplyShockM1 သို့ BitcoinBTC0.00005 SupplyShockM1 သို့ EthereumETH0.00144 SupplyShockM1 သို့ LitecoinLTC0.0102 SupplyShockM1 သို့ DigitalCashDASH0.00609 SupplyShockM1 သို့ MoneroXMR0.0062 SupplyShockM1 သို့ NxtNXT43.08 SupplyShockM1 သို့ Ethereum ClassicETC0.0814 SupplyShockM1 သို့ DogecoinDOGE159.37 SupplyShockM1 သို့ ZCashZEC0.0067 SupplyShockM1 သို့ BitsharesBTS17.01 SupplyShockM1 သို့ DigiByteDGB17.67 SupplyShockM1 သို့ RippleXRP1.96 SupplyShockM1 သို့ BitcoinDarkBTCD0.019 SupplyShockM1 သို့ PeerCoinPPC1.83 SupplyShockM1 သို့ CraigsCoinCRAIG251.63 SupplyShockM1 သို့ BitstakeXBS23.55 SupplyShockM1 သို့ PayCoinXPY9.64 SupplyShockM1 သို့ ProsperCoinPRC69.29 SupplyShockM1 သို့ YbCoinYBC0.000297 SupplyShockM1 သို့ DarkKushDANK177.23 SupplyShockM1 သို့ GiveCoinGIVE1196.16 SupplyShockM1 သို့ KoboCoinKOBO125.82 SupplyShockM1 သို့ DarkTokenDT0.509 SupplyShockM1 သို့ CETUS CoinCETI1595.1
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 05:05:03 +0000.